/ ngwaahịa / Ọla abụba / Garcinia cambogia wepụ ntụ
SKU: 90045-23-1. Category: Ọla abụba
Garcinia cambogia wepụ ntụ emere site na mkpụrụ osisi tamarind ma jiri ya mee ihe dị iche iche na-ere dị ka ihe dị arọ na-abaghị uru. Garcinia Cambogia bụ osisi nke mepụtara na India na Asia ruo ọtụtụ narị afọ. Garcinia Cambogia bụ obere ugu dị ka mkpụrụ osisi nke na-enweta ugbu a na traction na ndị na-edozi nri na ndị ọkachamara na-eri nri na-eji eme ihe.
Molekụla Formula: C16H21BrClNO4
(1) Ọmụmụ ihe site na iji GC eji ọtụtụ usoro, ebe ọ bụla site na otu gram ka 2.8 grams kwa ụbọchị. Akara usoro dị n'etiti 250-1000milligrams kwa ụbọchị.
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ 90045-23-1 AASraw. HNMR
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ Powder Powder Recipes:
Garcinia Cambogia wepụkwa ntụ ntụ maka ụda ibu